ကားလို့ မာနျူယယ် ဗီလာ နိုဗါ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကားလို့ မာနျူယယ် ဗီလာ နိုဗါ
ကားလို့မာနျူယယ်ဗီလာနိုဗါ (၁၉၅၉ ဇူလိင် ၂၇ ဘွား) သည် ဆော်တူမီသား နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀-၁၂ ကာလတွင် ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်သဘာဝရင်းမြစ်ဝန်ကြီး၊ ၂၀၁၄-၁၈ ကာလတွင် အခြေခံအဆောက်အဦ၊ သဘာဝရင်းမြစ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးအဖြစ် ဝန်ကြီးချုပ် ပတ်ထရိုက်ထရိုဗိုအာဒါလက်အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ 
လွတ်လပ်သောဒီမိုကရက်တစ်ခြေလှမ်း (Independent Democratic Action) ပါတီမှ ၂၀၂၁ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ပြိုင်သည်။  စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်တွင် ပြိုင်ဘက် ဂီးလယ်ဟမီပေါ့ဆာဒါကော်စတာကို မဲအရေအတွက် ၅၈% ရကာ နိုင်ပြီး သမ္မတဖြစ်လာသည်။
↑ Instituto de InovaçãoeConhecimento. "Ministro das Infraestruturas, Recursos NaturaiseAmbiente Archived2December 2018 at the Wayback Machine." (in Portuguese). Government of São Tomé and Príncipe.
↑ Abel Veiga (9 April 2021). "Carlos Vila Nova é o candidato da ADI às eleições presidenciais" (in Portuguese). Téla Nón.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကားလို့_မာနျူယယ်_ဗီလာ_နိုဗါ&oldid=687826" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။